यी सामान्य गल्तीहरुले सधै भान्सामा प्रयोग हुने तेल अस्वस्थकर हुन सक्छ - ज्ञानविज्ञान
१. खुला मुख भएको भाँडोमा राख्दा भान्सामै तेल अस्वस्थकर हुन सक्छ । खाने तेल जहिले पनि साँघुरो मुख भएको भाँडोमा राख्नुपर्छ । खुला मुख भएको भाँडोमा राख्दा अक्सिजन धेरै छिर्न पाउँछ । तेलमा अक्सिजन मिसिनु भनेको पानीको मात्रा पर्नु हो । यो अवस्थामा तेल चाँडै बिग्रिन्छ ।
२. तेल फ्याटी एसिड भएकाले अक्सिजन र पानीको रियाक्सन हुँदा फ्री फ्याटी एसिड बन्छ । साना -याडिकलहरू तयार हुन्छन् र रियाक्टिभ भएर स्वास्थ्यमा असर गर्छ ।
३. लामो समयसम्म एउटै भाँडोमा राख्दा पनि तेल बिग्रिन्छ । तेल राख्ने भाँडो बदल्ने तथा वेला–वेला सफा गर्नुपर्छ ।
४. एकपटक प्रयोग गरिसकेको तेल तत्काल अर्को परिकारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, उही तेललाई पटक–पटक तताउँदै र सेलाउँदै प्रयोग गर्दा हानिकारक हुन्छ । यस्तो तेल अर्को ताजा तेलमा मिसाउनु पनि हानिकारक हुन्छ ।
मुटुलाई बचाउन मद्दत गर्ने केही खानाहरू
१. हरीयो सागपात र सफा फलफूलमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ र स्वस्थवर्दक फाइबर पाइन्छ जसले खानालाई पचाउन मद्दत गर्दछ।
२. मुटु रोगीहरूले रातो फल मासु नखानुहोला।
३. मधुमेह र उच्च रक्तचाप भनेको मुटुरोगको पहिलो चरण भएकाले सोडियमयुक्त खाना र चिनीयुक्त खानालाई कम गर्दै लैजानुहोस्।
४. शरीरको मोटोपनालाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसैले कम क्यालोरी भएको र प्रशस्त पौष्टिक तत्व भएको खानेकुराहरूमा जोड दिनुहोस्।
५. मुटु रोगीले मात्रै नभई सबै जनाले बाह्य प्याकेटको र डिब्बामा बन्द गरिएको खानेकुरा नखानुहोस्।
६. शुद्ध गहुँको आँटामा प्रशस्त फाइबर पाइन्छ, त्यसैले आफ्नो दैनिकी खानामा यसलाई मिसाउनु सर्वोत्तम मानिन्छ।
७. गाईभैँसीको दूधबाट बनेको घ्यूमा उच्चमात्रामा बोसो हुने गर्छ, तर बनस्पती घ्यूमा थोरै मात्रामा बोसो हुने गर्दछ। त्यसैले मुटुरोगीहरूले बनस्पती घ्यूको सेवन गर्नु कम हानीकारक हुन्छ। तर यसलाई पनि नियमित नखानुहोस्।
८. धुम्रपान तथा मध्यपानले फोक्सो र कलेजोलाई मात्र नभई मुटुलाई समेत प्रत्यक्स असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मुटुरोगबाट चाँडै नै आफ्नो ज्यान गुमाउन चाहनुहुन्न भने आजै देखि धुम्रपान तथा मध्यपान जस्ता कुलतबाट टाढा रहनुहोस्।
हृदयघात हुँदा छातीको बीच भागमा छुरीले रोपेजस्तो, डोरीले कसेजस्तो वा ढुंगाले थिचेजस्तो पीडा हुन्छ ।
अलिकति हिँड्दा पनि दम बढ्छ भने बुझ्नुहोस तपाईलाई हृदयघातको खतरा छ ।
मुटु धेरै ढिलो वा धेरै छिटो चल्यो भने मुटुले राम्रोसँग पम्प गर्न सक्दैन । र, हृदयघातको खतरा हुन्छ ।
घिउ, तेल, नौनी, छाली, वटर र वोसो चिल्लो पदार्थ पाइने खाद्य पदार्थ खानु हुँदैन ।
मुटुरोगीले माछामासु नखाँदा राम्रो । माछामासु खाएमो कोलस्ट्रोल बढ्छ । र, त्यसले हृदयघातको खतरा बढाउँछ ।
बदाम, काजु, मुङ्फली, नरिवल जस्ता तौलिय फलहरु खानु हुदैन ।
टन्न खाने बानी छ भने त्यो हटाउनुपर्छ ।
साँझ सकेसम्म खाना नखाने ।
दाल, तरकारिको सुप, उसिनेको सागसब्जी खाने ।
चाउचाउ, बिस्कुट, नुडल्स्, कार्बोनिकपेय, अल्कोहलिकपेय र बढी नुन र नुनिलो जिनिस नखाने ।
नियमित व्यायाम अर्थात् दैनिक आधादेखि १ घन्टा मर्निङ वाक गर्ने ।
मुटु रोगीका लागी बिश्राम अत्यावश्यक छ । रातीको खाना पचिसकेपछि मात्रै सुत्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
दिउसो सुत्ने, विहान अबेरसम्म सुत्ने, राति अबेर सुत्नु मुटुरोगीका लागि हितमा हुँदैन ।
तनावरहित जिन्दगी जिउन सक्नुपर्छ ।
जिबनमा अति महत्वकांक्षा राख्नु हुँदैन ।
नाम, दाम र शक्तिका पछाडि मरीहत्ते गर्ने बानी मुटुका लागि राम्रो होइन ।
Don't Miss it भेडे खुर्सानी सेवन गर्नाले हामीलाई यस्ताे फाइदा गर्छ जानिराखाैँ
Up Next स्वस्थ शरीर हुन रगत सफा हुनुपर्दछ, कसरी सफा गर्ने त रगत ? जान्नुहोस्
मानसिक रुपमा स्वस्थ्य बन्ने उपाय, यस्ता छन्
लागू पदार्थ, रक्सी, ड्रग्स सेवन गर्दा मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना धेरै रहने भएकोले यी वस्तुबाट टाढा रहने । दैनिक जीवनमा…
राजमा सिमी जातको गेडागुडी (Kidney bean) हो | यो एक पञ्जाबी व्यञ्जन हो । प्रोटिनको उच्च स्रोत भएको राजमा केटाकेटी,…
१. ढलान भएको वा खोंचमा घर बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । २. हावा, पानी, प्रकाश, चौडा गल्ली भएको स्थान बसोबासका लागि…